Kulan looga hadlayay Xog uruurinta Caafimaadka oo ka Furmay wasaaradda Caafimaadka. | Puntland Ministry of Health
Kulan looga hadlayay Xog uruurinta Caafimaadka oo ka Furmay wasaaradda Caafimaadka.
Hoolka wasaaradda Caafimaadka Dowladda Puntland waxaa manta ka furmay shir dib loogu eegayo Buugta xogta Caafimaadka lagu uruuriyo.
Waxaa shirka kasoo qeyb galay Madaxda wasaaradda Caafimaadka,Iskuduwayaasha Gobolada,Xog uruuriyaasha wasaaradda ee heer Gobol,Masuuliyiin ka socday Ha’yadaha Caalamigaa iyo kuwa maxaligaa.
Agaasimaha waaxda Qorshaynta iyo hormarinta wasaaradda Caafimaadka DR.Cabdirisaq Xasan Ciise ayaa ugu horeyn shirka Furay waxaana hadaladisii ka mid ahaa”Shirkan manta wuxuu saabsanyahay sidii la iskula fiirin lahaa Buugtii horey xogta Caafimaadka lagu soo uruurin jiray,oo wax ka badal lagu sameeyay,lana keenay Buug Cusub, Runtii waxaa tihiin dadkii howshan sida saxdaa u qaban lahaa marka waa in aad ka faaidaysataan shirkan inta uu socdo kana doodan Buugtan Cusub wixii ka dhiman.”
Agaasimaha oo hadalkisii sii wata ayaa qeexay in Buugtii hore ee la isticmaalayay 2010kii ilaa hada ay ka koobnayeen 50 muujiyaasha xogta,kuwa hada ay ka koobyihiin 98 muujiyaasha xogta oo ah laba jibaar kuwii hore.”
Agaasimaha Cudurada Faaf Dr.Cali Diiriye ayaa isna hadal dardaaran ah ka jeediyay.
Shirkan ayaa socon doona mudo Sadex Barri ah sida uu noo xaqiijiyay madaxa Xog uruurinta wasaaradda Caafimaadka Puntland Dr.Sharmaake Naaleeye.
Isku soo wada duuboo Shirkan ayaa lagu baran doonaa macluumaad wax looga badalayo xog uruurinta Caafimaadka Puntland.